May 2022 – SainPwar
SainPwar > 2022 > May
မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ဦး ဦးခေါင်းကျည်ထိမှန်သေဆုံး မနေ့ မေလ ၂၀ ရက်က မန္တလေး – မုံရွာကားလမ်းမပေါ် ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ အိမ်စီးကားတစ်စီးကို စစ်ကောင်စီကနေ ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ဦး ဦးနှောက်ကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ကားက အရှိန်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန် ရုတ်တရက်စစ်ဆေးမယ်ဆိုပြီးတားတော့ ဘရိတ်ိတ်ပ်ရပ်မလို့ဘဲရှိသေးတာကို ပစ်ချလိုက်တာ။ ကားကမှန်ပဲ ကွာတာဆိုပေမဲ့ လူကတော့ ခေါင်းကိုထိသွားတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ကားကိုမရပ်တော့ဘဲ ချက်ချင်းမောင်းလာလိုက်လို့ Dead Body ရတာ၊ မဟုတ်ရင် မတွေးရဲစရာပဲ” လို့ မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူ ကိုကျော်ညီဇင်ဟာ အသက် ...
၁၅ မိနစ်အတွင်း ခြေထောက် နဲ့ လက် ဖြူ ဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု ၁၅ မိနစ်အတွင်းဆိုတော့ မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ခြေထောက် လက် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က ညိုတဲ့နေရာတွေ ဆဲသေတွေကို ဒီဖော်မြူလာနဲ့ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်နှစ်ဆင့် က ဒီလိုပါ။ အဆင့် ၁ ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို သင့်လက်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။ အုန်းဆီတစ်ဇွန်းကို အဲ့ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ဆားနဲ့အုန်းဆီကို ရောပြီး သင့်တံတောင်နဲ့ ဒူးကို လိမ်းလိုက်ပါ။ ၅ မိနစ် ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။ အဆင့်၂ သံပယိုရည်- လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း ...
အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိန်းမကောင်းတွေက မိသားစုအတွက်ပဲ ပိုက်ဆံသုံးတယ် မဖြုန်းဘူး အရည်အချင်း ရှိတဲ့ ယောက်ျားကောင်းတွေက မိသားစု အတွက်ပဲ ပိုက်ဆံရှာတယ်.. မိန်းမနဲ့ သားသမီးကိုပဲ လက်ဝတ်တန်ဆာတွေ ဆင်တယ် ကိုယ်တိုင်ကျ လက်စွပ်လေး တစ်ကွင်း ဝတ်ဖို့တောင် နှမြောတယ်.. အရည်အချင်းရှိတဲ့ ယောက်ျားကောင်းတွေက မိသားစု အတွက်ပဲ ပိုက်ဆံ ရှာတယ်.. မိန်းမနဲ့ သားသမီးကိုပဲ လက်ဝတ်တန်ဆာတွေ ဆင်တယ်.. ကိုယ်တိုင်ကျ လက်စွပ်လေး တစ်ကွင်း ဝတ်ဖို့တောင် နှမြောတယ်.. အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိန်းမကောင်းတွေက မိသားစု အတွက်ပဲ ပိုက်ဆံသုံးတယ်.. ...
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ တချို့နေရာက မှဲ့တွေ၊ အသားပိုတွေက ကိုယ့်ရဲ့အလှကို ဖျက်ဆီးနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ဖယ်ရှားရမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးထဲကမှ သဘာဝနည်းနဲ့ ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ကြွက်နို့ – ကြက်သွန်ဖြူကို ပါးပါးလေးလှီးပြီး ကြွက်နို့ပေါ်မှာ ကပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ အဝတ်စသန့်သန့်လေးနဲ့ စည်းထားပါ။ နာရီဝက်လောက်စည်းထားပေးပြီးတော့ ရေဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီနည်းအတိုင်း တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရင် ထူးခြားလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ – ဗီတာမင်စီ ဆေးပြားလေးတွေကို ကြိတ်ပြီး ရေနဲ့ရောနယ်ပါ။ ရောနယ်ထားတဲ့ ဗီတာမင်စီတွေကို ...
ကျန်းမာရေးမကောင်းသောမိခင်ကိုစောင့်ရှောက်နေသောသမီးဖြစ်သူအား ပထွေးဖြစ်သူမှ မိန်းမအလစ်တွင်… See more ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ္ပင်မြို့နယ်တွင် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ပထွေးဖြစ်သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းသော မိန်းမ၏ အလစ်တွင် အဓ္ဓမမှုကျူးလွန်ခဲ့သော သက်ငယ်မုဒိန်းတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်အိမ်ထောင်ပြုသဖြင့် ပထွေးနဲ့အတူ လိုက်နေရန် မသင့်တော်ဟုဆိုကာ မြေးမလေး မ—————– အား အဖိုးအဖွားများနှင့်အတူ နေထိုင်စေခဲ့သည်။ ယင်းသို့နေထိုင်ခဲ့ကြရာမှ လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းအနည်းငယ်တွင် သမီးဖြစ်သူ မနွယ်နီ ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် မြေးဖြစ်သူအား မိခင်ကို ပြုစုပေးရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ၁ ပတ်ခန့်ကြာပြီးနောက် မြေးဖြစ်သူ ...
လည်ပင်းမှာ LINES တွေဖြစ်နေတာကို ပျောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
လည်ပင်းမှာ LINES တွေဖြစ်နေတာကို ပျောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ လည်ပင်းမှာ lines တွေဖြစ်နေတာကို မကြိုက်လို့ ပျောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ လည်ပင်းမှာ အရေးအကြောင်း lines တွေပေါ်နေတာကို ပျောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ငုံ့ပြီး အနီးကပ်မကြည့်ပါနဲ့။ ဒုတိယပုံမှာပြထားသလို ကြည့်ပေးပါ။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ကြည့်တာက လည်ပင်းမှာ lines တွေ မပေါ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာသစ်သလိုပဲ လည်ပင်းကိုလည်း cleanser နဲ့ သန့်စင်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ညပိုင်း၊ ညနေပိုင်းရောက်ရင် မျက်နှာသစ်ပြီး skincare လိမ်းသလိုပဲ လည်ပင်းကိုလည်း ...
နံရံလိုနေပါ သမီးရေ(မိန်းခလေးတိုင်း ဖတ်ဖို့) သမီးရေ……… နံရံဆိုတာ မာကျောတယ် အေးစက်တယ် ခံစားမှုမရှိဘူး တုန့်ပြန်မှုမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်……… အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ဆောင့်တဲ့ သူကတော့ …… ထိမိခိုက်မိ ကြတယ်။ နည်းရင် နည်းနည်းပဲ ထိမယ် …… များရင် များများထိမယ် …… နံရံက တန်ပြန်တော့ မဟုတ်ဘူးနော် ပြုလုပ်သူရဲ့ အတိုင်းသာ တန်ပြန်သွားတာ ဒီလိုပဲ လူ့လောကမှာနေရင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အမြဲချစ်ခင်နေကြဖို့ အမြဲတမ်း သင့်တင့်အဆင်ပြေနေကြဖို့ …… အောင်မြင်တဲ့ သူတွေမှာ ဘယ်လိုလျို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိပြီး ကျရူံးတဲ့သူတွေမှာရော ...
ဇာတ်လမ်းအစက ဒီလိုဗျာ။ မနေ့က Fbပေါ်မှာ အကောင့်ထဲက ကလေးမတစ်ယောက်က ယတြာတစ်ခု Shareထားတာ မြင်တယ်ဗျ။ ကြည့်လိုက်တော့ ဖယောင်းတိုင်ကို ဂျင်းတစ်တက်ပေါ် မီးထွန်းခိုင်းတာ။တခြားဘာမှမပါဘူး။ Color Theoryနဲ့ နေ့ဂျင်းညဂျင်းဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ကို Mixလုပ်လိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့မှာစပြီး ကျနော့်ဖာသာ တစ်ယောက်တည်း စောက်သည်းယားလာတော့တာပဲ။ ဂျင်းဆိုတာက တေဇောဓာတ်အပူဓာတ်ကိုအားပေးတာ။ မီးဆိုတာကလည်း အပူပဲ။ ဆိုတော့ အပူနှစ်ခုကို နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ ဓာတ်ယူတာကို တွေးကြည့်တတ်ရင်တောင် အတော်လန့်စရာကောင်းနေပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂျင်းနဲ့မီးထွန်းတာကို ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ယတြာတွေထဲမြင်ထားဖူးခဲ့တော့ အပြစ်တင်မစောရဲသေးဘူး။ ငါများလေ့လာမှုနည်းနေလို့လားဆိုပြီး ပြန်ရှာရ ...
နေ့တိုင်းသုံး တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို ရေနွေး စိမ်ကြည့်လိုက်သော အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား ကြပါ) မြန် မာပြည်က ငွေစက္ကူများ။အိတ်ကပ်ထဲကအန္တရာယ်ကောင်။ သူတို့ဆီကနေလည်း Covid 19 က ကူးမယ်ဆိုတာ မယုံစရာမရှိပါဘူး။ ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ၉ ရက်လောက် နေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်…။ ခုပို က်ဆံတွေဆိုရင် သိပ်ပြီးညစ်နွမ်းနေတာတွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒါတောင်ရေနွေးနဲ့စိမ်လိုက်တာမှာ အဲ့လောက်ညစ်နေပါတယ်။ ငွေကိုလက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့…။ ပြန်အမ်းငွေမကိုင်ရအောင် ကို‌ယ်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အစွန်းထွက်မလိုအပြတ်ဝယ်တာပိုကောင်းပါတယ်…။ ကိုယ်ဝယ်တာ 2700 ဆိုရင် 3000ဖိုးအပြည့် တခုခုဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ ...
ပိုက်ဆံက သခင်ရှိတယ် ပိုက်ဆံမှာ ကျိန်စာရှိတယ်….
ပိုက်ဆံကိုချေးရင်ပြန်ဆပ်ပါ ပိုက်ဆံကိုပေးမယ်ပြောပြီး ကတိတည်တည်ပြန်ပေးပါ အခက်ခဲဆိုတာ လူ့ဘဝ သက်တမ်း ကြုံနေမှာမခက်ခဲဖူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူး အနည်းနဲ့ အမျာကြုံကြမယ်ပိုက်ဆံကို ကတိပျက်အောင် လုပ်ရင် သင့်ဆီပိုက်ဆံတည်မြဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံကို ကတ်စေးနည်း ချွေးကုတ်ပြီး စုနေမှ မြဲနေတာ မဟုတ်ပါဘူးကတိ တည်တည်နဲ့ ပေးစရာရှိပေး ယူစရာရှိယူပါ လက်ခက်ရင် ငွေပါခက်တယ် ကတိမတည်သူက အလုပ်ရှားပါတယ်ပိုက်ဆံ ကို ပြန်မဆပ်ချင်တဲ့ သူတွေဆီမှာငွေမမြဲပါဘူး လက်ခက်သူတွေ ကျင့်ကြံ ကြည့်ပါ ။ edit ပိုက်ဆံရှာရလွယ်တယ်လို့ စိတ်ထဲသတ်မှတ်ပြီးပိုက်ဆံရှာကြည့်ပါ ပိုက်ဆံရှာရလွယ်ပါတယ် ။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်. Zawgyi ပိုကျဆံကိုခြေးရငျပွနျဆပျပါ ...